Magacaabidda xukuumadda cusub: Saddex xulasho oo hortaala Rooble
Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa haysta 30-casho oo uu kusoo dhisayo Gole Wasiiro cusub.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay waxaa si aqlabiyad leh codka kalsoonida ku siiyey Golaha Shacabka, taasoo la macno ah in uu kusoo dhisi doono xukuumad cusub muddo 30 casho ah.
Rooble oo xafiiska joogaya waxyar ka yar shan bilood ayaa xusay in Wasiiradiisa ay ahmiyada koowaad siin doonan sideed qodob oo ay ugu mudan yihiin; ammaanka, doorashada, qabyotirka dastuurka iyo la dirirka musuqa.
Shaqada uu isku diray 57-jirkaan haysta dhalashada Sweden waxaa saddex sano iyo bar ku qaban-weyday xukuumadii Khayre ee Aqalka Hoose riday laba bilood kahor "kadib markii ay ku fashilantay gudashada waajibaadkeeda".
Dad badan ayaa is-waydiinaya qaabka ay ugu suurtagaleyso Rooble in uu dhamaan qodobadaan kuwada guuleysto, halka qaar kalana ay sheegayaan in ay ku xirnaan doonto hadba nooca xukuumadda uu soo magacaabo.
Wasiirka koowaad ee federaalka waxaa hortaala in xukuumadda uu soo dhisi doono uu ku saleeyo saddex xulasho oo ah tan kaliya ee hortaala. Mid walba oo kamid ah xulashooyinkaan waxay leeyihiin caqabado iyo fursado.
In uu soo celiyo wasiirada xilka sii haya: Tani waxay ka qeyb-qaadan kartaa in shaqada sii socota maadaama ay og-yihiin duldalooda jira. Balse, dadka duraya waxay tibaaxayaan in yihiin kuwa la tijaabiyey oo guuldareystay.
In uu soo xulasho xubno "karti leh": Rooble wuxuu fursad u haystaa, hadii uu u madax-banaan yahay, in uu golahiisa kusoo daro shaqsiyaad uu u arko in ay la shaqeyn karaan. Tifka kaliya ee loo yeeli karo waa in waqtiga ciili karo.
Xukuumad wadaag ah: Tani waxaa macnaheedu yahay in uu soo dhiso xukuumad laga talogeliyo dhinacyadda ay khuseyso sidda maamuladda, xisbiyada mucaaradka iyo Ururada Bulshadda Rayidka, sida shaqada ugu fududaato.
Inta badan xukuumadihii lasoo dhisay Soomaaliya mudada kala guurka waxa ugu badan ee ay ka shaqeeyeen waxay ahayd doorashooyinka iyaddoo madaxda xilka haysa isku dayday in ay isku jimeeyeen coddeynta, balse way ku adkaatay.
Rooble oo shaaciyey qodobo uu kala kaashanayo maamuladda
War Saxaafaded 24.10.2020. 14:20
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka mahadceliyey meelmarinta xukuumadiisa cusub.
Kormeer uu Rooble ku tegay isbitaalo oo waddooyin muhiim ah loo xiray
Soomaliya 11.10.2020. 15:00
Baarlamanka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Xukuumadda Cusub
Soomaliya 24.10.2020. 13:27
Sawirka ku hoos dadan xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Rooble
Soomaliya 21.10.2020. 10:10
Rooble oo digniin loo diray kahor inta uusan soo xulan wasiiro cusub
Soomaliya 03.10.2020. 16:50
Rooble oo ciidanka siiyey amar la xiriira falal kusoo badanaya Muqdisho
Soomaliya 10.10.2020. 21:41
Caqabadaha aan lagu baraarug-saneyn ee garbaduubi kara Rooble
Soomaliya 03.10.2020. 11:40
Rooble oo sharaxay mowqifkiisa qabyo-tirka dastuurka Soomaaliya
Soomaliya 14.10.2020. 17:06